Posted by တန်ခူး at 12:37 AM
မျက်မှန်ကြီးနဲ့ဘယ်ကလူကြီးလဲ တဲ့...
အိပ်မက်ထဲ ပေါ်လာရင်တောင် တရေးနိုးပြီး အူတက်အောင်ရယ်နေမိမှာ တဲ့...
ဦးလေးတယောက်လို စိတ်ထဲမှာ အမြဲထားခဲ့သူ တဲ့...
ဟင့်.. ဟင့်.. ဟင့်...
မှတ်ချက်။ ။ မောင့် ကိုယ်စား ခံစားရေးဖွဲ့ ပါသည်။
ဖူးစာ... ဆိုတာ ... ဦးရာလူ တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကပြောတယ်။
ဖူးစာဆိုတာ ... ဘယ်သူဖြစ်မလဲ...
ဖူးစာရေ မရက်စက်ပါနဲ့လိုပဲ ခြေသလုံးဖက်တောင်းပန်ရတော့မယ် တန်ခူးရေ။ ဘ၀မှာ အဲဒီတစ်ခုသာ လွဲရင် အရာအားလုံးက လေမတိုက်ပဲပြိုပြီ။
ဆွေလိုမျိုးလို ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ စိတ်မကစားဘူးတဲ့ သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးကို အချစ်ကြီးချစ်နေတာ အီးတီ မသိလဲ ဖူးစာကတော့ မျက်မှန်ကြီးနဲ့ ဦးလေးကြီးဘဲလို့ပြောမှာအသေအချာပါဘဲ....
ဖူးစာဆိုတာက ဗုဒ်ဓဘာသာ အယူနဲ့ ပဲရှိတာလား မသိဘူးနော့် လူကြီးတွေပြောပြောနေကြတာတော့ ဖူးစာပါရင် ညားကို ညားရမယ်ဆိုတာပဲ နိုင်ငံခြားအယူနဲ့ ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုနေမလဲမသိး) အစ်မ ဖူးစာရှင်ကို စမ်းသပ်ဖို့စဉ်းစားမိတဲ့အကြောင်းတွေက ရယ်ချင်စရာတွေကြီးပဲ ဟီးးး ။
တန်ခူးရေ.. “ဖူးစာ” အကြောင်းရေးသွားလိုက်တာ အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတာပဲ။ အင်း.. ကိုယ့်ဖူးစာရှင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ အရင်က သိချင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် တန်ခူးပြောသလိုပဲ မစမ်းကြည့်ရဲဘူး။ တကယ်တမ်းတော့ဖူးစာဖက် ဆိုတာ ဘယ်သူကမှ လုပ်ယူလို့မရဘူးနော်။ အားလုံးဟာ အတိတ်ဘ၀ရဲ့ “ကံ” အတိုင်းပါပဲလို့ပြောရမှာပဲ.. :)
“ခုတော့ မောင်နဲ့ ခိုင်ရဲ့ ဘ၀တွေဟာလည်း နှစ်လွှာပေါင်းမှ တရွက်ဖြစ်ရတဲ့...စွယ်တော်ရွက်ကလေးလို.......................”
ဟိ၊ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ စာသားတွေကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ခိုးချကာ ကွန်မင့်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကလေးကိုလည်း ကြိုက်တယ်ဗျို့။ တန်ခူးရေးတဲ့အထဲမှာ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ဟာသစွက်လာတဲ့ ပို့စ်ကလေးပါဘဲ။ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝ၊ အချစ် နဲ့ ဟာသကို ရောမွှေပြီး ခပ်မြူးမြူးလေး ရေးလိုက်တဲ့အခါ.....ဒန်တန့်ဒန်........။
a very detailed post u have wrote sis..i like..
i believe in fate too..destiny ..
that has been fixed way long before we are even born..hmm..
i m waiting patiently for HIM!..someday somehow somewhere i believe that lovers will unite..!
ဖူးစာကိုတော့ ယုံကြည်ပါတယ် .. ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့မှတော့ စမ်းသပ်ဖို့ စိတ်မကူးထားဘူး။ တော်ကြာ မမပြောသလို ကိုယ်ပဲစိတ်ဆင်းရဲနေရရင် ဒုက္ခ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖူးစာနဲ့ပတ်သတ် ကြားဖူးတာ တစ်ခုက ည၁၂နာရီတိတိမှာ မှန်ကိုနောက်ပြန်ကျောခိုင်းပြီး ရုတ်တရက် လှည့်ကြည့်လိုက်ရင် စက္ကန့်ပိုင်းကြာတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ဖူးစာရှင်ပုံ မြင်ရတယ်ဆိုတာတွေကအစ ကြားခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်ခါမှာတော့ မစမ်းသပ်ခဲ့ဖူးဘူး (ကြောက်လို့)။ အဓိက အရေးကြီးဆုံးက မိမိချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ ချစ်သူနဲ့ တစ်ဘ၀လုံး သာယာလှပဖို့ အချစ်ကို မွေးဖွားပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ပဲ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ချစ်တတ်သူတိုင်း မိမိချစ်တဲ့သူသာလျင် ဖူးစာရှင်ဖြစ်ပါစေ :)
ကျမတို့ မိသားစု TV ကလာတဲ့ ဇတ်လမ်းတွဲကို ကြည့်နေကြတာ။
သမီးကြီးကလည်း သူ့ပညာနဲ့၊ သူ့ဂုဏ်ဒြပ်နဲ့။
သမီးငယ်လေးကလည်း သူ့ငယ်ဂုဏ်လေးနဲ့ လှလှပပ၊ကြွကြွရွရွ။
ခက်နေတာက သမီးလတ်။ နေပုံထိုင်ပုံကြီးက ရိုးရိုးအအ၊ ပြောပုံဆိုပုံကလည်း တုံးတိတိကြီး။
သူလေးရှေ့ရေး စိတ်မအေးနိုင်တဲ့ ဖခင်ကြီးမှာ စပ်ရဟတ်ရတာ၊ လာလာတော့ကြည့်ကြပါရဲ့၊ ဟန်ကတော့ မကျသေး။
တနေ့ ကျမရုံးပြန်နောက်ကျတော့ ဇတ်လမ်းတွဲပြချိန်ကပြီးသွားပြီ။
အိမ်က ဖအေကြီးက “ဒီမှာ မင်း သားက ဇတ်လမ်းတွဲကြည့်ပြီးပြောနေတယ်။” ကျမကလည်း ဒီနေ့ လွတ်သွားတာဆိုတော့ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ “ဆိုပါဦး”
ဇတ်လမ်းထဲမယ် ဟိုအလတ်မလေးက သူ့ကိုလာကြည့်ကြ၊ ပြန်သာသွားကြ၊ ဘာမှလည်း အကြောင်းမထူးတော့။ ရှက်ရှက်နဲ့ ၀မ်းနည်းပြီး ငိုရှာတာပေါ့။ သူငိုတာကြည့်ပြီး သားကမေးတယ်။
“ဖေဖေ သူဘာလို့ ငိုတာလဲဟင်။”
“သူ့ကို မကြိုက်ကြလို့ ငိုတာပေါ့ကွာ။”
သားပြန်ပြောလိုက်ပုံက “ဒါများဘာငိုစရာရှိလဲနော်ဖေဖေ။ ဖေဖေတောင် မေမေ့ကို ယူသေးတာပဲနော်” တဲ့
ချစ်တဲ့သူသည်သာ ဖူးစာရှင်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ကိုတာတူးရေ…
ဖူးစာပါလို့ ပါ နှင်းပန်းရယ်….
မောင်မျိုးရေ…နိုင်ငံခြားမှာလဲ ရှိပုံပေါ်တယ်…တို့ ရုပ်ရှင်တကားကြည့်ဖူးတယ်….
ဟုတ်ပါတယ်နုရေ…တကယ်တော့ ဖူးစာဆိုတာ ရှေးရေစက်ပေါ့….
ကိုပေါရေ…ဟာသရေးတော်တဲ့ ကိုပေါကိုနဲနဲ အတုခိုးကြည့်တာပါ…
ညီမလေးဆုဝေရေ…အချစ်စစ်မှန်ရင် ဖူးစာဆုံတတ်ကြပါတယ်…ခုလိုလာလည်တာကျေးဇူးပါ…နောင်လဲလာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
ညီမလေးလင်းလက်ဆုတောင်းလေးက ချစ်သူတိုင်းအတွက်ပြည့်ပါစေလို့ ထပ်ဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်နော်…
‘မ’ သားလေးက အဖေဘက်တော်သားလေးပဲ…ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မေမေအကြောင်း သူမသိသေးလို့ ဖြစ်မှာ…
နဖူးစာ ရွာ လည် တာ က ကော..
တကယ်တော့.ဖူးစာ ဆို တာ..ကိုယ့်ရဲ့ လိုနေ တဲ့ အခြမ်းလေး ပေါ့။ အခြမ်းပဲ့ တွေ..အခြမ်း ပို တွေ..အခြမ်း တူ တွေ ကျ တော့..ဘယ် နှယ့် လုပ်ပ
ဟုတ်တယ်နော် မကေ…လိုနေတဲ့ အခြမ်းလေးက အံမ၀င်ရင်…
ဇိုလည်း ဇို့ ဖူးစာရှင်ကို သိချင်လိုက်တာ..
ဒါပေမဲ့ မမပြောသလိုပဲ ဖူးစာရှင်က အရမ်းမုန်းရတဲ့ သူ ဖြစ်ရင် တကယ် စိတ်ညစ်ရမှာနော်…